ProKeygens Hack team ngokuziqhenya ukwethula kini entsha futhi olusha Rust CD Key Generator Ithuluzi ....
Qalisa FIFA 18 CD Key
Kungani uchitha imali yakho uma ungathola FIFA 18 CD Key kule sayithi mahhala! Kuleli sayithi web ungasebenzisa FIFA wethu ...
Wena nje okumbalwa kude ukufuya wakho Rise of Incarnates CD Key...
Need for Speed 2015 CD Key uMdali
Hey abadlala, Need for Speed 2015 CD Key Generator inthanethi ....
Unyaka 2070 CD Key Generator
Sethula kuwe entsha futhi olusha Anno 2070 CD Key Generator ....
Best CPA Yenethiwekhi [Kwavivinya] 2014
An inethiwekhi lobulungu uba i phakathi abamemezeli (abaxhumana) futhi umthengisi lobulungu izinhlelo ...
Grand Theft Automobile 5 ugubha the Fourth of July ngempelasonto nge yabadlali abaningi isenzakalo esiyingqayizivele. Phakathi naleso senzakalo, abadlali bangaragela phambili kabili njengoba esheshayo uthole loot.All ezinye esiyingqayizivele GTA Online Imisebenzi wadlala kusukela namuhla kuya kuJulayi 6 Ngokuqinisekile uyonika kabili Idumela Amaphuzu. Uma udlala i Independence Day Online Indawo lwadlalwayo unique, uzothola izikhathi ezimbili ngokuthi GTA kakhulu $ njengoba ejwayelekile ngaphezu ibhonasi sipho RP. Lokudlala Independence Day siqukethe Imisebenzi like Grand Senora Ugwadule (LTS), Guns and Gasoline (Parachuting), Udaka, Izithukuthuku futhi Gears (Land Race) futhi Road ezithothene (Team Deathmatch).
Rockstar Games ngokuqinisekile abuyisele izinto in-game ukuthi wangenela ngesikhathi last yabo Independence Day senzakalo. However, Ngalesi sikhathi bayazivikela esingaphansi okuningi ezibizayo:
Abathengisi yonkana Los Santos nazo restocking yonke initial Independence Day imfuyo yabo Special, nge 25 % Izinga Isaphulelo on konke, ehlanganisa izimoto like Iloli Liberator isilo ngesithuthuthu EnguMbusi, the Rocket Firework Launcher and ammo yayo, plus ahlukahlukene gear red-white-and-blue kuhlanganise Hats, T-Shirts, Buso and more.
Evikini elizayo, Rockstar has a umcimbi ezehlukene kuhlelwe. The ayeyithole ngendlela embi Inzuzo Social Club Indawo Weekend uyoqala ngo-July 10 ugijime kuze 12th. Phakathi nazo zonke lezi zinsuku, unique yezinyoni amaconsi ngokuqinisekile avele emhlabeni wonke video game. Inside, kungaba bethola abadlali Independence Day gear like the Fireworks Launcher and Fireworks. Uzoba ikhono ukuthenga iNkosi EnguMbusi futhi Liberator ngesilinganiso isaphulelo kakhulu.
Njengoba leli gama lisikisela, Inzuzo ayeyithole ngendlela embi Social Club Indawo Weekend kuyinto kukhunjulwa ayeyithole ngendlela embi Inzuzo Ingxenye 2 Update. Lokhu ukuthuthukisa, sethula on July 8, sibandakanya uhla olude lwezinto for GTA 5 gamers ukuthenga yabadlali abaningi. Nakhu konke kufakwe kwaba:
Coil Brawler (off-road imoto)
Coquette Invetero Blackfin (sports Classic car)
Vapid Chinese (muscle car)
Lampadati Toro (okunethezeka speedboat)
Dinka Vindicator (ngesithuthuthu)
Umnembi Pistol (single-shot isibhamu)
Knuckledusters (zethusi amaqupha)
Ngaphezu kwalokho, izitolo kulo lonke Los Santos ngokuqinisekile ethwele new ephezulu izingubo nezinye izinsimbi. On top of konke, ngcono uyokwethula inkulumo esiteshini somsakazo Lab bonke ezisekelweni. Isiteshi Lab ukuxuba ezihlukahlukene izingoma ngaphambilini ekhethekile ukushintshashintsha PC of GTA 5.
Lo mcimbi ngeshwa ngeke wanezela aphinde kwamabhange. Rockstar uye ngempela watusa ukuba kuzodingeka akulinde uze ube nesikhathi eside nganoma isiphi wanezela break-ins, enomuzwa baze ukubenza:
Kulabo kwamabhange ecela more, ukuqonda ngomusa ukuthi Grand Theft Auto Online kwamabhange zaba omkhulu kangaka akusiwona inhlobo yento sikuphi kusheshe ukudala nokukhululwa kwamabhange ezengeziwe njengabanye uJobe izindlela kanye nezinhloso. Singa, however, sisebenzelana nabanye updates cool GTA Online ukuthi ungalindela phezu ezinyangeni ezizayo.
Tags: grand theft auto 5 Izindaba, gta 5 Izindaba, GTA V izindaba